Jubbaland oo ka jawaabtay eedeyn ay usoo jeediyeen mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Jubbaland oo ka jawaabtay eedeyn ay usoo jeediyeen mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug
Maamulka Jubbaland ayaa markii ugu horeeysay si kulul uga jawaabay eedeyn kaga timid maamulka Galmudug, taas oo ku saabsan in ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland ay ka qeyb qaateen dagaaladii maalmihii ugu dambeysay ka dhacaayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubbaland C/qaadir Xaaji Maxamed Lugadheere oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa nasiib darro ku tilmaamay in madaxda maamulada Puntland iyo Galmudug aaney weli ku guuleysan inay damiyaan colaadda Gaalkacyo, islamarkaana maamulka Jubbaland lagu eedeeyo inuu taageero soo siiyay maamulka Puntland.
“Waxaa nasiib darro ah madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland inay xalin waayaan khilaaf yar oo dhexdooda ah oo sababay dhimasho, barakac, qalqal siyaasadeed iyo mid amni, waxaan soo jeedineynaa in lagu bedalo wada noolaansho iyo is afgarad, waxaan ognahay in dagaaladii sokeeye meelihii kasoo bilawdeen Gaalkacyo ka mid tahay” Sidaas waxaa yiri madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubbaland C/qaadir Lugadheere.
C/qaadir Lugadheere ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wax ciidan ah oo ka tirsan Jubbaland oo kasoo baxay magaalada Kismaayo islamarkaana ka qeyb qaaatay dagaaladii Gaalkacyo ka dhacaayay.
Si kastaba oo ay ahaataba, hadalkaan kasoo baxay maamulka Jubbaland ayaa imaanaya xilli maamulka Galmudug ay magaalada Gaalkacyo kusoo bandhigeen seddax askari oo mid ka mid ah uu qabo dhaawaac culus oo ay sheegeen inay ahaayeen ciidamo Jubbaland ah oo garab siinayay kuwa maamulka Puntland.
Galmudug ayaa sheegtay in askartaasi laga soo qabtay iyaga oo ka bar-bar dagaalamaya ciidanka Puntland, waxa uuna tilmaamay in askarta qaarkood laga keenay magaalooyinka Kismaayo, Buuhoodle, Laascaanood iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, ma jirto ilo madax banaan oo xaqiijinaya in askartaasi ay maamulka Galmudug kusoo bandhigeen magaalada Gaalkacyo inay ka tirsan yihiin ciidanka Jubbaland, iyo inkale, iyadoona weli ay xiisad colaadeed ka dhex jirto maamulada Galmudug iyo Puntland oo weli ciidankooda isku hor-fadhiya galbeedka Gaalkacyo.